China Double-shot backlit keycaps Mugadziri uye Mutengesi | Mestech
Yakapetwa-kaviri yakadzosera kumashure keycaps
Yakapetwa-kaviri yakadzosera kumashure keycaps(Double-jekiseni backlit keycaps) inoitwa kuburikidza nekaviri-jekiseni kuumbwa maitiro. Maitiro aya anogona kuburitsa yakakwira mhando keycaps muhukuru uye nepamusoro. Zvinhu zviviri zvinobatana pamwechete zvakanyatsosimba, uye zvinogona kuve chero musanganiswa wemuvara.
Backlight keycapstendera mwenje kuti upfuure nepakajeka nzvimbo yebhatani pamusoro, zvichikurudzira anoshanda, kuti aone makiyi zvakajeka munzvimbo dzine rima kana rima kana nemwenje unopenya. Iyo mbiri yakapfurwa yakadzoserwa keycaps yezvinhu zviviri ine yakanakisa mhedzisiro uye inonyanya kushandiswa zvakanyanya.
Yekhibhodi ine backlit keycaps
Ndeupi mukana weakaviri-akapfura backlit keycaps
Backlight keyboard inonyanya kuratidzwa mumakiyi ekhibhodi kana mwenje wepaneru, unogona kunyatsoona mavara akakosha mune yakasviba kana yakasviba nharaunda.
Yese kiyi yekhibhodi inoshandisa yakasarudzika epurasitiki dema chikamu chine yakanaka shading, chena chikamu ine yakasimba kujeka, kuti uwane basa rekutanga re backlight keyboard. Izvo zviri nyore kuti vanhu vabate nenyaya dzehusiku, uye kuoneka kwekhibhodi kwakanaka kwazvo.
Backlight keyboards anosiyana nemamwe makiyibodi: Musiyano mukuru pakati pemwenje mamaki uye mamwe makiyibhugi ndeyekuti backlight keyboard inodzoserwa husiku, kuti igone kushanda zvakanaka husiku. Iyo yakajairika keyboard haina kuburitsa mwenje. Zvakaoma kuona zvakajeka usiku. Ipapo iyo backlight keyboard inoshandisa chena mwenje-inoburitsa diode, asi yakajairika keyboard haina.
Transparent keycap ndechimwe chezvakakosha zvikamu zve keyboard rinovheneka module.
Nezve yakajeka yakajeka backlit keycaps
Mhando dzemakiyi dzinogona kuve dzakakamurwa kuita epurasitiki makiyi uye silica gel makiyi.
Zvinoenderana nezvinodiwa zvekutumira, kiyi kiyi inogona kugoverwa mumhando nhatu:
B. yakazara transmittance;
C. yemuno pateni fonti kutumira, inova ndiyo inonyanya kukosha uye inoshanda mhando yemakiyi ekutumira parizvino.
Kune hunyanzvi huviri hwekugadzira backlit makiyi epateni font mumusika:
1. Laser yakatemerwa yekujekesa keycaps
1) Hunhu hwe laser engraving keycap: yakajeka muviri muviri, kupopera kwepasi, radium yekunyora font, font yakajeka, zvikanganiso zvakakura, kupopera, pendi yepasi ichapfeka;
Kunyanya kushandisa laser musimboti kugadzirisa pamusoro pemakiyi, akawanda makiyi vagadziri anoshandisa radium yekuveza maitiro kugadzira zvigadzirwa zvakakosha, zvinowanzo shandiswa panhare mbozha, zvemagetsi maduramazwi, kure maremendi, zvigadzirwa zvekhibhodi, mwenje wekhibhodi pamakiyi, iko kushandiswa kwe "optical couplet "kiyi yekuveza radium ichaita kuti zvigadzirwa zvakakosha zvive zvakanaka uye zvakasikwa.
2). Kugadzira tekinoroji ye keycaps ye laser engra font:
Laser-yakatemerwa mafonti pane keyboard pamusoro inoratidza zvinhu zvakadzama kuburikidza nekupwa kwemvura yezvinhu, kana kukonzera makemikari uye epanyama shanduko yezvinhu zvepasi kuburitsa zvisaririra nechiedza simba, kana kupisa zvimwe zvinhu nesimba remwenje, uye "nyora" zvisaririra, kana kupisa zvimwe zvinhu nesimba rakareruka, zvichiratidza giraidhi inodiwa uye zvinyorwa. Laser yekunyora font pane keyboard pamusoro inokodzera silica gel makiyi uye akaoma epurasitiki makiyi (akajeka epurasitiki PMMA, PC, ABS). Maitiro akajairwa ndeekuti hwaro hwekhibhodi hwakajeka zvinhu, uye rima opaque pendi inosaswa pamusoro. Zvadaro anoiswa pamusoro Laser achiita zvokutemera muchina. Iyo opaque pendi iri pamusoro inopiswa patembiricha yakakwira munzira yemafonti kufumura iwo opaque base yenzvimbo yefonti.
Laser yekunyora fonti pane iyo keyboard pamusoro haidi chimiro chakati, uye inogona kuitwa mune chero nhamba.
2. Kaviri-kupfura kuumba backlit keycaps
1). Hunhu hwekupfura-jekiseni jekiseni kuumba kiyi chivharo: iwo muviri mukuru wekiyi chivharo haioneke, font iri pachena, iyo font yakajeka, uye font iri hasha. Zvikuru zvinokanganisa: Mafonti ekumusoro ari nyore kudurura glue panguva yejekiseni.
2). Kugadzira maitiro eakaipfura-jekiseni-rakaumbwa mwenje-kuburitsa kiyi chivharo:
Magetsi ekumusoro ekumusoro anowanzo gadzirwa nemaviri-mavara zvigadzirwa nekaviri jekiseni kuumbwa. Chikamu chepasi chakagadzirwa neopaque nhema epurasitiki zvinhu, uye iyo yakajeka font chikamu chakagadzirwa neyakajeka epurasitiki (PC, PBT), inojowa kuita yakazara kuburikidza neforoma kaviri, nokudaro ichiziva iro rekutanga basa reiyo yakajeka khibhodi font.
Nekuda kwemutengo wakakwira weiyo yakapfura-yakapfurwa muforoma, iyi nzira yekugadzira inongokodzera chete kiyi yekutapudza makiyi ezve zvigadzirwa nemirairo mikuru. Semuenzaniso, mitambo, makomputa emakhibhodi uye imwe hombe nhamba yezvigadzirwa zvepamusoro-giredhi.
* Taura mhando mbiri dzakakurumbira kaviri-pfuti jekiseni kuumbwa keycaps - PBT backlit keycaps, P + R backlit keycaps
PBT yakadzoreredza keycaps
PBT keycap ndeimwe mhando yakapetwa kaviri jekiseni kuumbwa kiyi chivharo, mune izvo zvinyorwa zveyakajeka font chikamu ipurasitiki PBT.
Maitiro ekupetwa kaviri backlit keycaps
Backlight keycaps inowanzo gadzirwa nezvinhu zviviri nekaviri-kupfura jekiseni kuumbwa. Iyo cap yemuviri yakajairika opaque epurasitiki ABS kana ABS / PC iyo ine yakanaka shading, uye chena chikamu chiri pakati ipurasitiki zvinhu PBT uye ine yakasimba kujekesa, nokudaro ichiziva yakakosha mashandiro eiyo backlight keyboard. Izvo zviri nyore kuti vanhu vabate nenyaya dzehusiku, uye kuoneka kwekhibhodi kwakanaka kwazvo.
Iko kushandiswa kwePBT keycaps
PBT keycaps yakanyanya kuomarara, kupfeka kuramba uye hapana chikonzero chekupenda. PBT makiyi anozivikanwa kwazvo kune emitambo 'makhibhodi. PBT keycaps kazhinji chena. Nekukura kweichi chiitiko, PBT makiyi pamusika izvozvi ave nemhando dzakasiyana dzemavara, akasiyana emhando monotonous mavara uye kunyange muraraungu mavara ave achishandiswa nevatengesi.
PBT yakadzoreredza keycaps uye keyboards
P + R kaviri jekiseni backlit keycaps
Iko kushandisa maviri-ruvara jekiseni kuumbwa kugadzira kiyi chivharo ine backlight athari. Tora iyo yakajeka yakajeka epurasitiki (ABS kana PC) semuviri mukuru, uye vhara iyo yakapfava opaque plastiki (TPR, TPU kana TPE). Backlight kuburikidza neiyo yakapfava glue yakasiiwa kunze kwechinyorwa, zvakapfava pamusoro zvigunwe kunzwa kwakanaka kusangana. Mavara uye mapatani ari pamusoro pemakiyi akaumbwa zvakananga nejekiseni kuumbwa. Maitiro acho ari nyore, kugadzirwa kwakakwira, uye mutengo wakaderera. Iyo inokodzera kugadzirwa kwakawanda kwezvigadzirwa, senge keyboards, zviridzwa zvekurapa, zvigadzirwa zvedzidzo nematoyi.
Mestech kambani inoshanda mujekiseni jekiseni uye kugadzirwa kweviri jekiseni kuumbwa backlight keycaps. Kana iwe uchida kugadzira backlight kiyi, ndapota taura nesu.
Pashure: Plastiki chimbuzi chigaro chakuvhuvhu
Zvadaro: 10 mhando epurasitiki nebwe uye kushandiswa
Plastic zvokurapa bhokisi jekiseni Kuumbwa